[Archlinux] GRUB အမွေအနှစ်သည်ထောက်ပံ့မှုမရ | Linux မှ
[Archlinux] GRUB အမွေအနှစ်သည်ထောက်ပံ့မှုမရရှိသေးပါ
aroszx | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, အခြား
မနေ့ကမှာကြေငြာခဲ့သည် ArchLinux သတင်းစာမျက်နှာ, Que GRUB 2.x အဆိုပါ repository ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည် [အဓိက]အဘယ်မှာရှိ အဓိက packages များ Archlinux ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် GRUB အမွေအနှစ်အထောက်အပံ့ (ဗားရှင်း 0.9x) ပြီးပြီနှင့်အထုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည် AUR (Arch အသုံးပြုသူ repositories).
သင်ရှိပါကကြောင်းအကောင့်ကိုယူပါ GRUB အမွေအနှစ်နှင့်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးပြcanနာမရှိဘဲဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သည် (အားလုံးတည်ငြိမ်ပါတယ်), ဒါပေမယ့်၏အသင်း archlinux update လုပ်ဖို့အကြံပေးခဲ့သည် GRUB ၂.၁၁သို့မဟုတ် ပွောငျးလဲခွငျး အခြားသူတွေ၏တ ဦး တည်းရန် ကျောက်တံတား ကြောင်းနေဆဲထောက်ခံမှုရှိသည်။ အကယ်၍ ဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ် LILO သို့မဟုတ် Syslinux use »ကိုသုံးမည်။
အသုံးပြုသူများကိုတောင်းခံရသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း la GRUB အပိုင်း ထဲမှာ ဝီကီ ​​Archသို့ အသေးစိတ်တပ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်များ.
ကောင်းပြီ၊ ကြိုတင်ငါပြောမယ် ငါ GRUB2နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုကိုပြု၏နှင့်လမ်းလျှောက် ပြproblemsနာမရှိဘူး။ ငါအခြေခံ update ကိုညွှန်ကြားချက်ထားခဲ့ပါ GRUB ၂.၁၁.
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် GRUB2ကို install လုပ်ပါ။ ၎င်းအတွက် root ကို run သည်။
၎င်းသည်သင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည် GRUB အမွေကို uninstall လုပ်ပါ ဒါကြောင့်နှင့်အတူပconflictိပက္ခ၌တည်ရှိ၏ GRUB ၂.၁၁။ တပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ command ကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။
ငါတို့လိုအပ်တယ် os-prober အတွက် GRUB ၂.၁၁ ကဲ့သို့သောအခြား operating system များအသိအမှတ်ပြုရန် Windows ကို, ဥပမာအား။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း run ပါ။
၎င်းသည် config file တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည် GRUB ၂.၁၁။ ထွက်ပေါက်မှာ သေချာအောင်လုပ်ပါ ဘာပေါ်လာတာလဲ မင်းရဲ့စနစ်အားလုံး။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် ငါတို့ install လုပ်ပါလိမ့်မယ် GRUB ၂.၁၁ ထဲမှာ MBR Command ဖြင့်
သင်၏အမှု၌မပါလျှင် sda (ကောင်းတာပေါ့၊), သင့်လျော်သော disc ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » [Archlinux] GRUB အမွေအနှစ်သည်ထောက်ပံ့မှုမရရှိသေးပါ
GRUB2, ငါ့အတွေ့အကြုံအရ, ၎င်း၏ယခင်ထက်အများကြီးလျော့နည်းရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်နှင့်၎င်းကို configure ကောင်းသော interfaces ရှိပါတယ်။ ငါအမြဲတစေဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၌တည်သော Arch, သေးတရားဝင်အသုံးပြုတော်မမူကြောင်းတွေးမိ။
Element Zero (Wolf) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါ Grub Legacy ၏ရိုးရှင်းမှုကိုနှစ်သက်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဖြစ်သကဲ့သို့ငါကစွန့်ခွာသွားမယ်။
Element Zero (Wolf) ကိုတုံ့ပြန်
ငါ burg အများကြီးပိုနှစ်သက်, သူက themes များနှင့်သာ။ ကြီးမြတ်စိတ်ကြိုက်ကိုထောကျပံ့သော
ဒါဟာ Arch မှာဒီအဘို့အချိန်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
GRUB အမွေအနှစ်အကောင်းဆုံး xD
Arch သည် Debian သို့မဟုတ် Gentoo ၏အနည်းဆုံးတပ်ဆင်မှုနှင့်တူသည်။ သင်သည် mini kernel တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးထိုမှသင့် system ကိုတည်ဆောက်သည်။ ဒီပုံစံအတိုင်းလိုက်ရင်ပိုပြီးအစွမ်းထက်သော / ပြည့်စုံသော bootloader တစ်ခုကိုသင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါကသင် GRUB2, SysLinux သို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အမှန်တရားကတော့ GRUB2 ကို Legacy နေရာတွင်အစားထိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မလိုက်နာခဲ့ဘူး၊ ဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေကိုငါမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကိုငါသဘောကျတယ်၊ ခေတ်သစ် bootloader ။
သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း GRUB Legacy ၏ရိုးရှင်းမှုကိုဘာမှအစားထိုး။ မရ။
GRUB2 ကိုခင်ဗျားသိလား။ ၎င်းသည်စုပ်ယူနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရုပ်ဆိုးပြီးရှုပ်ထွေးဆုံးနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့မခံစားရပါ။
ငါ GRUB2 သုံးရန်အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုသာစဉ်းစားနိုင်သည်။
၁။ သင်၏ Hardware ဖွဲ့စည်းပုံကို Legacy မှမထောက်ပံ့ပါ။ ထို့ကြောင့် GRUB1 လိုအပ်ပြီး၊ ခေတ်မီပြီး modular ဖြစ်သောကြောင့် hardware နှင့် software အမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။
၂. Distro သည်အသုံးပြုသူအတွက်ဖြစ်ပြီးသင်ကလူကြိုက်များသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုနှင့်စတင်မည့် menu တစ်ခုသင်လိုချင်သည်။
GRUB99 SOBRA ၏ ၉၉% သောအိမ် / ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အ ဦး များ - စာလုံးအကြီးအသေး - Legacy သို့မဟုတ် Lilo တို့ပင်သူတို့၏တာ ၀ န်ကိုတောက်ပစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်ဟုငါအာမခံသည်။
တစ်ခုတည်းသောသနားစရာကသူတို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ bootloader ဖြစ်သော Syslinux အစား GRUB2 ကိုသုံးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်ပို့စ်မှာ @wpgabriel အတွက်ဖြစ်သည်။ FromLinux အသုံးပြုသည့်စနစ်သည်တုံ့ပြန်မှုဖြင့်မဟုတ်ဘဲအဆုံးသတ်၌အသစ်သော entries အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုသည်ကိုငါမေ့ခဲ့သည်။
grub2 ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကအလုပ်တွေကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ distro က lilo နဲ့ "lilosetup" GUI ကိုချစ်တယ်။ လွယ်ကူ၊ ငါထင်တာကတော့ "နောက်ဆုံး" ဟာတည်ငြိမ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတဲ့အခါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ အရင်းအမြစ်တွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူး (bootleaders ကအကန့်အသတ်မဲ့) ။ အဘယ်ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့် Gnome2 နှင့် KDE 3.5 အတွက်လွမ်းဆွတ်မှုရှိသနည်း
ငါသည်လည်းအခြားဖြန့်ဖြူးမှုများတပ်ဆင်ချင်သည်နှင့် LILO သည်“ ရှည်လျားသော” kernels ၏အမည်ပါသော bug မကုန်မချင်း LILO ကိုသုံးခဲ့သည် (Slackware တွင်၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းပါလာသည်။ ) ငါ patch ကိုတွေ့ပြီ၊ t၊ ဘာဖြစ်လို့အလုပ်မလုပ်တာလဲဆိုတာကိုအချိန်မရွေးကြည့်ပြီး GRUB Legacy ကို install လုပ်ဖို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်။
ဒီနေ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပြီ၊ သင်ဖော်ပြခဲ့သောအမှားအယွင်းကိုဗားရှင်းအသစ် (၂၃.၂) ဖြင့်ဖြေရှင်းကြောင်းဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင်ဖတ်လိုက်ရသည်။ ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက် patch လုပ်မယ့်အစား SalixOS slkbuild နဲ့အထုပ်အသစ်တစ်ခုကိုငါဖန်တီးလိုက်တယ်။ Lilo ကိုပြုပြင်ပြီးတဲ့နောက် boot ကို lilosetup, voila တို့နဲ့ပြန်ပြုပြင်လိုက်တယ်။ lilo -v command နဲ့လုပ်ချင်ရင်တော့အတူတူပါပဲ။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် script ကိုရနိုင်သည်။ http://salix.enialis.net/x86_64/13.37/source/a/lilo/
Lilo ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ lilosetup နဲ့ grub ထပ်ထည့်မယ့်အရာတွေမပါဘဲလိုအပ်တဲ့သွင်းအားစုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့နားလည်သည် - grub အမွေနှင့် grub2 သည်အလိုအလျောက်၊ အထူးသဖြင့်ပ7ိပက္ခဖြစ်သည့် $ XNUMX နှင့်၎င်း၏ loader တို့ဖြင့် seduce ...
အိုး! ဒီထုံးစံအရထုံးစံအတိုင်းသင် lilo အသစ်ဖြည့်စွက်ရမည့် lilo ဗားရှင်းလိုအပ်ကြောင်းသင်ပြောပြရန်မေ့ခဲ့သည်။
slkbuild တွင် ၂၂.၈ မှ ၂၃.၂ ကိုပြောင်းရန်သတိရပါ။ သင် 22.8-bit version လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာလက်ရှိ repo ကနေ download လုပ်ပြီး slkbuild ကိုသက်ဆိုင်ရာဗိသုကာနဲ့တည်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်။
ငါ Slackware ကနေလမ်းလျှောက်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်ဗားရှင်းအသစ်ထုတ်ကုန်မရှိကြောင်းသိရတာဝမ်းသာပါတယ်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာ Arch iso အသစ်သည်ထွက်လာပြီးသတင်းအသစ်များနှင့်ထွက်လာသည်
နို့ရည် ၂၈ ဟုသူကပြောသည်
အလွယ်ဆုံး option ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်ငါ manual လုပ်လိုက်တယ်။ ဝီကီကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ နောက်ခံပုံတစ်ပုံကို grub2 ထဲထည့်လိုက်တာလား ??
အီလက်ထရွန် ၂၂၂ruko222 ဟုသူကပြောသည်
Chakra တွင် repositories တွင်စမ်းသပ်မှုကိုရရှိပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းသည်မည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိဘဲမွမ်းမံခဲ့သည်
uuuh ငါသံသယဝင်ခဲ့ပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်! နှုတ်ဆက်ခြင်း! ^^
Thunderbird 15 Beta 1 ကိုဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစကားပြောခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်
CentOS နှင့်အတူ Oracle ရှုပ်ထွေး